Banyere anyị - RayHaber
HomeRayHaber - newsgbọ okporo ígwè na ọsọbanyere Anyị
7 nọ na-enye ọrụ a na-egbochighị na ya na akuko ndekọ mpaghara maka okporo ígwè, okporo ụzọ na ụzọ mgbanaka. rayhab bụ 65 bụ nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke debanyere otu puku akụkọ ozi ya na usoro mgbasa ozi ọhụrụ na nke na-anọghị na ya. rayhab bụ Na mgbakwunye na ozi ọma na anyị website 65 puku ozi ọma Bulletins na kwa auctions na 20 afọ nke ụgbọ okporo ígwè ochie, anyị bụ ndị mpako na-anabata ihe nkezi 60 puku ndị mbịambịa pụrụ iche na otu ụbọchị.
Nzube anyị bụ ime ka anyị 100 puku kwa ụbọchị ọbịa, mbụ 100 puku saịtị na mba rankings, tinye n'ime akpa puku saịtị na Turkey.
News: Akụkọ 65.000, vidiyo 1500
Taa na History: 1 July 2008 na-azụ Freedom / mmepe ememe maka Hürriyet Ụgbọ okporo ụzọ ziri ezi 01 / 07 / 2013 Taa ke History ego na July 1 1873 ụzọ-Varna ụgbọ okporo ígwè Baron Hirsch Turkey si European Ulo Railways Company. 1 July 1911 Bulgurlu-Ulukışla (38km) e meghere na Anatolian-Baghdad Railway. 1 July 1917 Na mpaghara Maan, a na-ehichapụ waya 7, a na-agbapụ ala ala abụọ, a bibiri 7 telegraph pole. Emeghe 1 July 1930 Bolkuş-Filyos akara. 1 July 1934 Ngalaba alaka Fevzipaşa-Diyarbakır na ọdụ Yolçatı abiala Elazığ. 344 ụgbọ okporo ígwè Fevzipaşa-Diyarbakır. E mepere 24 kilomita nke 11 kilomita si na Yolcati na 1934 na August. 1 July 1937 Toprakkale-Payas na Fevzipaşa-Meydanıekbase akara were nationalized na meghere maka ọrụ. 1 July N
HGS njehie ndị ọkwọ ụgbọala 17 / 04 / 2013 Njehie dị iche iche nke ụlọ ọrụ na HGS na-ahapụ ọtụtụ nde ndị nwe ụgbọ ala n'ọnọdụ siri ike. Dị ka mkpesa nke ndị nwe ụgbọ ahụ zigara na www.sprisvar.com; Edere ụfọdụ klas nke ngwá ọrụ dị iche iche na akara nke ndị ọzọ na-eji. Ndi ochichi, "Nsogbu nke ihe nwere ike ime," ka o kwuru. HGS njehie amaghị. Jide n'aka ijide n'aka na a na-edekọ klas nke ụgbọala gị n'ụzọ ziri ezi mgbe ị na-anata HGS. N'ihi na, mgbe klas nke ụgbọala a na-eji aha ya eme ihe dị iche, na n'ụbọchị a na-akpọghị aha na klas ahụ, a na-etinye ntaramahụhụ ya. Nsogbu ọzọ bụ na ma ọnụ ma jupụta ebubo na-agbanwe agbanwe dị ka iche iche nke ụlọ. Na mkpesa sitere n'aka ndị ọchịchị, Gelen
3. ụgbọ elu ahụ bụ anyị kwesịrị 14 / 11 / 2014 Ọdụ ụgbọ elu bụ ihe dị anyị mkpa: Minista Elvan 3. Banyere ọdụ ụgbọelu '3. Ọdụ ụgbọ elu bụ ihe dị mkpa nye anyị. Onye ọ bụla amaala Turkish kwesịrị ịdị mpako ma dị mpako. State Ụgbọelu Authority General Manager Orhan Birdal na-gi General Manager Temel Kotil nwekwara na oghere mere na Ataturk Airport Uwe mkpuchi akwa gara ijeoma ke njem mbụ gi Geneva oku ikuku si n'ógbè a Lutfi Elvan karịsịa 3. ajụjụ jụrụ ndi oru nta akuko banyere ọdụ dị ka ọ zara, sị: "Uto ọnụego nke ụgbọelu ụlọ ọrụ na Turkey na abụọ-ọbula ọgụgụ. Ọ bụrụ na anyị kwuo na anyị ga-anọgide na-eto eto a, ya bụ, ihe ọmụmụ niile na data Eğer
Ọhụụ nke Istanbulite nke metrobus bụ Metrobus 26 / 04 / 2012 Ngwongwo nke IETT na-egosi na-egosi mmeghachi omume azụmahịa siri ike nke ụmụ amaala. Kadir Topbas meghachikwara omume mgbe ndị na-elekọta mmadụ na-ada n'ala na-enweghị ebe obibi. E wepụrụ azụmahịa nke nwere ihe omume ahụ. Ime ihe na mgbasa ozi mgbasaozi, karịsịa onye omee egwu Vatan Şaşmaz na ihe ngosi ahụ na bogus metrobüs efu efu. Istanbul Metropolitan Municipality Mayor Kadir Topbas, ụnyaahụ Ibọrọ inwale News nke "N'ezie efu dị ka e gosiri na ad. Nke ahụ ga-enwe ihe efu Metrobus gbara na a na-amụ na mgbasa ozi na okike. M nwere ike ịbụ a nta ọzọ ufiop. M nwekwara ike ime ya dị ka ha ga-egosi na m na-akwukwọ. A obere ihe ...
Anyị na-ebu ụgbọ njem ma ọ bụ na azụ anyị 09 / 03 / 2013 Anyị na-ebu ndị njem ma ọ bụ site na ụgbọ oloko awara awara ma ọ bụ na anyị na azu ụnyaahụ, ọ fọrọ nke nta "ogologo ụbọchị dum" Transportation Minister Binali Yildirim na State Railways ndị ọnụ na General Director Süleyman Karaman ... First Istanbul Anyị gara oghere ememe na Expo Center ... ifm ụnyaahụ; "Eurasia Okporo ígwè-3 Railway Light Okporo ígwè Infrastructure na lọjistik Fair" ... e nwere oghere nke ngosi "European ọbịa" la Binali Yildirim onye ọnụ; Turkey na-adịbeghị anya 10 "ụgbọ okporo ígwè" na "25 ijeri pound nke ego" na-eme ka a ọnụ ọgụgụ ha 2023 "45 ijeri pound," ma ọ bụ o kwuru na ya ga-enweta. Ma mgbe ị na-ekwu nke ahụ; Achọpụta nnụnụ n 'nnụnụ. O kwuru, sị, N N'ihe 10. A na-ede abụ nke afọ, nke e dere ma kpọọ aha ụlọ ọrụ Yıl
Ụgbọ ala Kadıköy Kartal na-agbapu mmiri 15 / 03 / 2013 Kadikoy, bụ obodo ukwu kasị ukwuu na Republic büyük kwuru na Kadıköy Metro Metro na-eri mmiri. Kadir Topbaş na-ekwu "nnukwu mpaghara metro na akụkọ ihe mere eme nke Republic ın na mmiri na-esi na ọdụ ụgbọ ala Kadıköy-Kartal, nke na-agwụ na 7 afọ. Kadir Topbaş na-ekwu "nnukwu mpaghara metro na akụkọ ihe mere eme nke Republic ın na mmiri na-esi na ọdụ ụgbọ ala Kadıköy-Kartal, nke na-agwụ na 7 afọ. Ọ na-achọ obi ike ịbanye n'ọwara ahụ. Obodo Istanbul Metropolitan Mayor Kadir Topbaş emechabeghị na-eri 3 ijeri pound Kadolay-Kartal ụgbọ ala 17 August 2012'da banyere ọrụ. 8 karịa ụgbọ oloko. mebiri ọnwa ahụ. Topbas, X XUMUM, gụnyere railcars, ụgbọ okporo ígwè na ọdụ Top
Nna-ukwu na-ahụ ngwa ngwa na-ewe iwe na onye edemede Italy 11 / 09 / 2013 Fast Train boss nnọọ iwe Italian na-ede akwụkwọ: Ltf ụlọ ọrụ uloru na ọfịs ọkàiwu, nke bụ maka oru ngo na-ekwenyere nkwado maka elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè oru ngo na Italy, na Italian dere Erri De Luca na-akwadebe na-emeghe nchọpụta. Italy si Turin-Lyon n'etiti obodo na-ewere na ahịhịa na katọrọ elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè oru ngo, Ltf ụlọ ọrụ na-ahụ maka oru ngo, Italy si award-emeri onye so dee Erri de Luca ka ulo oru nchọpụta. N'etiti ndagwurugwu Susa nke dị na Piemonte, ndị na-azụ ụgbọ okporo ígwè na-alụ ọgụ ruo ọtụtụ iri afọ, na-azọrọ na ọ ga-emerụ gburugburu ụwa, ọnọdụ akụ na ụba na ahụike mmadụ. Enweghị ndị na-eme nchọpụta n'ime òtù TAV kwuru na ọ bụ Torino Prosecutor's Office ular terrorist i, Mba
Istanbul metro na-egwu mmiri 19 / 11 / 2013 Istanbul metro na-agba mmiri mmiri: Mmiri mmiri na-agba na njem ụgbọ elu na ebe ụfọdụ nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè Kartal-Kadıköy bụ ụmụ amaala na-ewute. Dị ka ozi ọma Vatan August 17 3 2012 ijeri pound nke ngwongwo na na Kadikoy-Kartal Metro ojii na-aputa ihe n'akparamagwa 16 22 kilomita site oghere n'ime ọrụ ịkwụsị oyiyi gosiri na Kozyatagi Istanbul bi na ụjọ na-atụ. A na-ahụ na ciment anaghị ekpuchi ya na plasta na marble na mpaghara nke ọwara ụkwụ nke ndị njem na-eji. Ndị na-eji metro na-ewe iwe site na mkpuru mmiri na mgbidi. Ụzọ ụgbọ ala Kadikoy-Kartal, nke e wuru dị ka obodo kachasị elu na akụkọ ihe mere eme nke Republic ma wuchaa na 7 afọ, bụ okpu
TCDD mere ka a mara ọkwa na mmiri Marmaray nwere mmiri (Video) 20 / 11 / 2013 TCDD mere ka a tọhapụ ya na ebubo nke ụgha nke Marmaray: Taa (19 November 2013) 10 nke Marmaray na ụfọdụ weebụsaịtị. na 13. enwere azịza maka ntinye mmiri. The Republic of Turkey State Railways (TCDD), na Marmaray mmiri leaked boro ya na ọ bụ adịgboroja, ya kọọrọ dịghị ajụjụ nke ọ bụla mmiri leaks na usoro. N'okwu ederede nke General Directorate nke Turkish State Railways (TCDD), ụfọdụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ nke Marmaray, 10. na 13. nkebi nke mmiri na-ekwu na nkwupụta ahụ na-ekwu, nkwupụta ahụ ekwesighi ikwu. N'ịchọpụta na e nweghị nke 13 nke dị na Marmaray, X
TCDD Eskişehir bibiri n'ọchịchịrị 05 / 01 / 2014 TCDD: "TCDD Eskişehir bụ Embed Ọchịchịrị" News nke asılsızdır.türki Republic State Railways (TCDD), "Eskisehir TCDD e wee lie ya gbara ọchịchịrị," ka akụkọ titled bụ enweghị ihe ndabere. N'okwu edere edepụtara site na TCDD, e mepụtara ihe ahụ dị ka ndị a: CD TCDD Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Nye Eskişehir Provincial Directorate maka ịnyefe ikike nke onwe ha. 10 Na September, akwụkwọ 2013 dere, a rịọrọ ya ka ọ gbanwee eriri eletriki. Osmangazi Electric Distribution Inc. Provincial Operations Directorate 18 September 2013 dere ede, site ọzọ na-kagbuo a òkè nke cable tupu ịmalite na demolition nke mmiri na-akọ ihe Ndahie nke a akụkụ nke nzukọ anyị ga-adị. ...
Taa na History: 1 July 2008 na-azụ Freedom / mmepe ememe maka Hürriyet Ụgbọ okporo ụzọ ziri ezi
HGS njehie ndị ọkwọ ụgbọala
Anyị na-ebu ụgbọ njem ma ọ bụ na azụ anyị
Ụgbọ ala Kadıköy Kartal na-agbapu mmiri
Nna-ukwu na-ahụ ngwa ngwa na-ewe iwe na onye edemede Italy
TCDD mere ka a mara ọkwa na mmiri Marmaray nwere mmiri (Video)
TCDD Eskişehir bibiri n'ọchịchịrị